Dowladda oo ka digtay in la bixiyo tallaal aan la ansaxin | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo ka digtay in la bixiyo tallaal aan la ansaxin
Dowladda oo ka digtay in la bixiyo tallaal aan la ansaxin
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa soo saartay digniin ku aaddan in xarun caafimaad ay oggolaansho la’aan bixiso tallaalka ka dhanka ah cudurka COVID19.
Wasiirka caafimaadka ee Kenya Mr. Mutahi Kagwe ayaa xusay in daawooyinka tallaalka laga qaadan karo keliya isbitaallada ay dowladdu shaacisay.
Sidoo kale waxaa uu wacad ku maray in xarumaha caafimaadka ee aan si buuxda u adeegsan tallaalkii lagu wareejiyay lagula xisaabtami doono.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in isbitaalladan aan la siin doonin daawooyin dheeraad ah.
Mr. Kagwe ayaa amar ku bixiyay in maamulka isbitaal kasta oo loo oggolaaday inuu dadweynaha ka tallaalo cudurka COVID19 laga doonayo inuu toddobaad walbo warbixin gudbiyo isagoo intaasi ku daray in hadii aan amarkan loo hoggaansamin isbitaalka lagala laabanaya shahaadadii lagu diiwaangeliyay.
Warbixinta wasaaradda caafimaadka ee dalka waxaa ku cad in kenyaanka qaatay tallaalka COVID19 ay tiradoodu tahay 2.75 milyan.
Previous articleNuurdiin Xaaji oo ka qayb galay shirka dacwad oogayaasha bariga Afrika